Smartwatch: ụdị kacha mma, ozi ọma, nkuzi na ihe ndị ọzọ! - A gam akporo | Gam akporo (Peeji nke 2)
Huawei ekwuputala na ya ga-emepe ụlọ ahịa ngwa maka smartwatches ya iji gbasaa ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị dị.
Akụkọ kachasị ọhụrụ metụtara Samsung smartwatches na-egosi na ọ ga-akwụsị iji Tizen ma yikwasị OS ga-agafe
Eeh. Gụrụ na nri, Facebook na-arụ ọrụ na smartwatch. Ihe nzuzo nzuzo dị iche iche gbara gburugburu ...
Ihe abụọ kachasị atụ anya maka smartwatches kachasị ọhụrụ nke Samsung ga-abata site na February 22.
Xiaomi Mi Band 6: GPS, ihe ikuku oxygen ọbara na dakọtara na Alexa
Anyị amaworị ụfọdụ n'ime uru ndị ọgbọ Xiaomi Mi Band na-enye
O were ihe karịrị otu afọ ka European Union nye Google ụzọ ịga n’ihu ịzụta Fitbit
A mara OnePlus Band na ihe mmetụta SpO2 na ikike kwụụrụ aka rue izu 2
A mara ọkwa OnePlus Band na ụfọdụ atụmatụ mara mma. Anyị na-ekpughe ozi gị niile n'otu n'otu.
Ihe osise mbụ nke OnePlus Band
OnePlus agbachapụwo ihe osise izizi nke ihe ga-abụ mgbaaka mgbapụta mbụ ya e mere baptizim dị ka OnePlus Band
A ga-enye mgbaaka mgbapụta OnePlus na Jenụwarị 11
Onye OnePlus buru ụzọ banye ụwa nke ịkọwa ọla aka ga-abụ otu OnePlus Band ga-ekpughere na Jenụwarị 11 na India.
Ma amaghị ihe na-enye na Reyes? Na ihe electronic ngwaọrụ ị ga-abụ ezi
Ọ bụrụ na ịmabeghị ihe ị ga-enye na Reyes, n'isiokwu a anyị na-akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ elektrọnik.
Onye mbụ OnePlus ama ama agaghị abụ elekere anya, kama ọ bụ mgbaaka quantifying, dị ka Android Central si kwuo
OnePlus ga-ebido smartwatch mbụ ya na mbido 2021
Onye mbụ OnePlus smartwatch ga-ada n'ahịa n'oge nkeji mbụ nke 2021, dịka ọkwa Peter Lau si kwuo
Realme na-ekwupụta Watch S Pro, Watch S Master Edition na Buds Air Pro Master Edition
Realme ekwuputala Watch S Pro, Watch S Master Edition, na Buds Air Pro Master Edition. Elekere abụọ na ekweisi ọhụrụ.
A mara ọkwa Xiaomi Mi Watch Lite site na iji nlele SpO2 na nnwere onwe ruo ụbọchị 9
Xiaomi ekwuputala Xiaomi Mi Watch Lite smartwatch ohuru ohuru di nkpa. Mụta ihe niile banyere ya ebe a.
Cubot weputara C3 Smartwatch maka naanị $ 32,99 site na inye ego
Cubot weputara C3, smartwatch ọhụrụ maka naanị $ 32,99 na Disemba 10. Emeputa na-emekwa a raffle.
Neo si Vodafone abịarute, smartwatch nke Disney mere, mara mma maka ụmụaka, nke ga-eme ka anyị nwee ha n'oge dị adị
ZTE Watch Live bụ smartwatch ọhụrụ nwere nnwere onwe ruru ụbọchị iri abụọ na otu
ZTE ekwuputala nke ọhụrụ ZTE Watch Live smartwatch nwere nnwere onwe ruru ụbọchị iri abụọ na otu. Mara ihe omuma ohuru nke smartwatch ohuru.
A mara ọkwa Redmi Watch na ihuenyo nwere agba yana kwụụrụ onwe ya otu izu
A mara ọkwa Redmi Watch dị ka smartwatch ọhụrụ na-atọ ụtọ maka mgbakwunye ya na ọnụ ọnụ ya. Mụtakwuo maka ngwaọrụ ahụ.
Ihe ngosi 3 nke Galaxy na-enweta mmelite na ọbara oxygen
Samsung Galaxy Watch 3 na-enweta mmelite ọhụrụ na mmelite na mmụba oxygen na ihe ịnụ ntị
Fitbit Sense na Versa 3 emelitere na-enweta nkwado maka onye enyemaka Google
Ejirila ngwa ngwa Fitibt Sense na Versa 3 ka dakọtara na Google Assistant site na isonyere Alexa.
Esi eweputa nseta ihuenyo na Samsung Galaxy Watch
Samsung Galaxy Watch na-enye gị ohere ịme nseta ihuenyo, anyị na-akọwa otu esi ewere ha ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Samsung's Galaxy Fit 2 dị na Spain maka euro 49
Samsung mgbaaka mgbapụta ọhụụ, Galaxy Fit 2 dị na Spain maka naanị 49 euro.
Honor Band 6 bụ smartwatch ọhụrụ nwere ụbọchị ruru 14 nke nnwere onwe
Honor ekwuputala ọkwa ọhụrụ Honor Band 6, smartwatch nke na-ewe ngwangwa ọgbọ. Mara ihe niile banyere ya.
Realme Watch S bụ onye ọrụ ugbu a, nke nwere akụkụ aluminom na ọnụego kụrụ aka
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Realme Watch S smartwatch ọhụrụ, elekere dị ọnụ ala na ọtụtụ atụmatụ.
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke imewe na njirimara teknụzụ nke Amazfit Pop, Huami ọhụrụ smartwatch dị ọnụ ala.
Na-achọ ọnụ ala smartwatch? Ugbu a realme Watch na-efu naanị euro 29,99 maka Prime Day
Jiri uru ego 40 zụta realme Watch maka naanị 29,99 euro ekele Amazon Prime Day 2020.
Sony Wena 3: Otu ọhụụ ọhụụ nwere ikike nke otu izu yana nkwado Alexa
Sony Wena 3 ka ndị Japan mara ọkwa dị ka ụlọ ọrụ mara mma mara mma. Mara ihe omuma banyere ngwaọrụ ohuru a.
Samsung na-arụ ọrụ ECG na Galaxy Watch 3 na Watch na-arụ ọrụ 2
Arụ ọrụ na-enye gị ohere ịme electrocardiogram na Samsung Galaxy Watch dị ugbu a na Watch 3 na Watch nọ n'ọrụ 2
Amazfit Band 5 ka ekwuputara: Ọhụrụ smart band na 15 ụbọchị nke nnwere onwe na wuru na-Alexa
Xiaomi ekwuputala Amazfit Band 5 dika ihe kachasi nma nke kachasi nma n'ile ahia. Mara nkọwa ya niile.
Vodafone ekwuputala nkwekọrịta nkwekọrịta na Disney iji wepụta smartwatch maka ụmụaka na ekeresimesi a. Anyị na-agwa gị nkọwa.
Huawei Watch GT2 Pro bụ onye ọrụ ugbu a
Onye nrụpụta Asia gosipụtarala Huawei Watch GT2 Pro ọhụụ, smartwatch nke na-enye nnwere onwe dị mma yana ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe ngosi 2 nke Galaxy Watch ga - enweta otu oru nke Galaxy Watch 3
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Galaxy Watch nọ n'ọrụ 2 ga-enweta nnukwu akụkụ nke akụkọ ngwanrọ dị na Galaxy Watch 3 na nso nso a
OnePlus ga na-akwadebe smartwatch, Onye OnePlus Watch
Ha gbalịrịla na 2016, ọ dị ka ugbu a ihe niile dị n'ụzọ ọ ga - abụ OnePlus Watch, Lau nke mbụ smartwatch.
Samsung Galaxy Watch 3 bụ nke gọọmentị ugbu a: imewe na atụmatụ
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke Samsung Galaxy Watch 3, nke ọhụrụ Samsung smartwatch iji zoo Apple Watch 5
Unboxing nke Galaxy Watch 3 tupu ngosi ya
Otu izu tupu nkwupụta ya, ebipụla nyocha izizi na enweghị igbe nke Galaxy Watch 3 na ịntanetị
Nzube na atụmatụ nke Samsung Galaxy Watch 3, smartwatch nke Samsung na-esote na-etu ọnụ maka njiri mara arụmọrụ dị elu.
Galaxy Watch 3 ga - etinye onye na - achọpụta ọdịda na mmegharị ahụ
Ọgbọ ọzọ nke nso nso nke Galaxy Watch ga-ewebata ọrụ ọhụrụ abụọ: njikwa mmegharị na nchọpụta ọdịda
Xiaomi Mi Band 4C ka ekwuputala: Egwuregwu egwuregwu ọhụrụ nwere ụbọchị 14 nke nnwere onwe
Xiaomi ekwuputala Mi Band 4C, igwe egwuregwu ohuru nke ga - abia ihe di nkpa na Asia kemgbe mmalite ya.
Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ ọhụrụ ga-esite n'aka Galaxy Watch 3
Anyị amaworị ụfọdụ ọrụ ga-esite n'aka Galaxy Watch 3 na-esote nke ga-akụ ahịa n'izu ndị na-abịanụ.
Yabụ ị nwere ike ịmeghe Windows 10 na Xiaomi Mi Band
Anyị na-akọwa usoro ị ga - agbaso iji nwee ike ịmeghe Windows 10 site na iji Xiaomi Mi Band n'ụzọ dị mfe. Ọ na-ewe naanị nke abụọ!
Huawei Mate Watch ga-nzọ na sistemụ arụmọrụ ya
Asịrị ndị ọhụrụ na-egosi na Huawei Mate Watch smartwatch ga-abata na sistemụ arụmọrụ nke HarmonyOS, na-ahapụ Android Wear n'akụkụ.
Wepu interface na atụmatụ nke Samsung Galaxy Watch 3
Ejirila njirimara ndị ọrụ, na mgbakwunye na njirimara teknụzụ ikpeazụ nke Samsung Galaxy Watch 3 na-abịa site na ndị nrụpụta.
Leaked Samsung Galaxy Watch 3 na-agbanwe agbanwe!
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke Samsung Galaxy Watch 3, smartwatch na-esote onye nrụpụta ga-abata na-ebu akụkọ, gụnyere ntụgharị ntụgharị.
A mara Oppo Band: mgbaaka mgbaaka ọhụụ nwere NFC yana nnwere onwe nke ụbọchị iri na anọ
Oppo ekwupụtala mgbaaka mgbaaka ọhụụ akpọrọ Oppo Band. AMOLED panel, Bluetooth na ọtụtụ ihe maka ọnụahịa dị oke ala. Muta ihe banyere ya ebe a.
Ezigbo ozi ọma maka ndị hụrụ ezinụlọ smartwatch Korea n'anya. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na, Samsung Galaxy Watch 2 ga-eweta ihe ijuanya.
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke mmelite ọhụrụ nke Huawei Watch GT2 na GT2e, nke gụnyere ọnọdụ iji were foto were see foto.
Ndị Asia na-ekwu na realme, ụlọ ọrụ nke lekwasịrị anya n'ahịa ya na India, gosipụtara n'ihu ọha nkwa ya na ...
Xiaomi Mi Band 5 ga-enwe nkwado maka Alexa Amazon
Akuko ohuru banyere Mi Band 5 na-egosi na o nwere ike inye nkwado maka enyemaka onwe onye nke Amazon, Alexa, mita oxygen ọbara na ndị ọzọ.
Amazfit Ares, nke a bụ Xiaomi ọhụụ na batrị anaghị agwụ agwụ
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke Amazfit Ares, elekere Xiaomi ọhụrụ nke na-etu ọnụ maka nnukwu atụmatụ, arụmọrụ, batrị na ọnụahịa.
Blackview weputara X1 smartwatch na mmefu ego gam akporo ekwentị siri ike, BV5500 Plus
Blackview ekwuputala ngwaahịa abụọ ọhụụ: Blackview X1 bụ smartwatch mara mma nke nwere ogologo ogologo na ekwentị BV5500 Plus.
Ugbu a dị site na ụlọ ahịa Honor na Spain, ụdị ọhụrụ nke Honor Magic Watch 2, smartwatch ọhụrụ nke na-akwado ezigbo ọnụahịa
Samsung bụ onye nke abụọ na-emepụta smartwatches n'oge nkeji mbụ nke 2020
N'agbanyeghị na Samsung belatara òkè ahịa ya na nkeji iri na ise nke 2020, Samsung gara n'ihu na-anọ n'ọnọdụ nke abụọ site na ire ere n'ụwa.
Samsung Galaxy ọhụrụ nke Samsung banyere ịkụ ahịa
Samsung Galaxy ọhụrụ Samsung ka natara asambodo n'aka gọọmentị China, yabụ mbido ya agaghị egbu oge.
Redmi Band bụ ọhụụ ọhụrụ nwere nnukwu ikike ime obodo ma nwee nnukwu ihuenyo mmetụ OLED iji nyochaa egwuregwu ahụ.
Xiaomi Mi Kids Watch 4 na 4 Pro, elele umuaka ohuru nwere ihuenyo AMOLED na njikọ 4G
Xiaomi egosiputa ohuru Mi Kids Watch 4 na 4 Pro smartwatches, smartwatches abuo emere maka umuaka ulo.
Redmi na-akụ nzọ na mpaghara smart band na Band, nzọ a ga-ewepụta ugbu a na China.
SmartWatch TAG Heuer na-aga n'ihu nzọ na Wear OS
Onye na-emepụta Switzerland TAG Heuer gosipụtara ụdị ọhụrụ nke usoro ejikọtara, jikwaa, dị ka ndị gara aga, site na Wear OS
Oppo Watch bụ onye ọrụ gọọmentị: ọ na-abịa na agba OS na nha abụọ
Oppo ekwuputala ọkwa Watch, smartwatch nke na-abịa nha abụọ dị iche iche ma na-enye nnwere onwe dị mkpa.
Oppo si smartwatch, Oppo Watch Series, ekpughere na March 6
Na March 6, a na-egosipụta Oppo smartwatch, nke a na-egosi Oppo Watch Series, nke onye nrụpụta a na-abanye na smartwatches.
Realme Band kpughere nkọwa tupu egosie ya na Machị 5
Realme ga - ebido na Machị 5 smartwatch ọhụrụ ya, nke akpọrọ Band. Ọ ga-abata n'akụkụ Realme 6 na Realme 6 Pro ọhụrụ.
Oppo si smartwatch leaks iji Google Wear OS
Ihe onyonyo ohuru nke Oppo smartwatch na-agbapụ, onye mbata ya na-esonyere Oppo Find X2 na Machị.
Samsung Gear S2 na-enweta mmelite ọhụrụ dị mkpa
Samsung kpebiri imelite Gear S2 smartwatch mgbe obere oge gachara. Ọ na-eme nke a site na ndozi ndị ama ama, gụnyere inye nnwere onwe ka mma.
Puma PT9100, smartwatch ọhụrụ dị maka euro 250
Puma amalitela igwe ọhụụ ọhụrụ nke nwere akara ngosi T9100 ma dị na ahịa ndị India site na mmalite.
Sọpụrụ na-akpọsa elekere MagicWatch 2 Limited Edition
Honor na-ekwuwapụta ọhụụ ọhụrụ MagicWatch 2 Limited Edition, ọ na-abịa na atụmatụ dị oke egwu yana yana nnwere onwe dị ukwuu nke izu abụọ.
Xiaomi Mi Band 5 ga-enwe nnukwu ihu na nkwado NFC maka mmadụ niile
Ọgbọ nke ise nke Mi Band 5 nwere ike itinye nnukwu ihuenyo na GPS zuru ụwa ọnụ.
Xiaomi weputara Mitu Children's Learning Watch 4Pro
Xiaomi ekwuputala ọhụụ Mitu Children's Learning Watch 4Pro na ụmụntakịrị n'uche. Igwe buru ibu nke nwere otutu ngwa.
E gosipụtara Xiaomi Watch Color
Xiaomi na - eme ọfụma ọhụụ na - ele ihe ọhụụ na China mgbe ọnụọgụ dị iche iche dị na ngwa nkecha na nke nwere ọtụtụ ọrụ.
Amazfit-T-Rex ọhụrụ, ga-ewepụta ya na Jenụwarị 8
Na Jenụwarị 8, Huani ga-egosi smartwatch ọhụrụ ya, Amazfit T-Rex, smarwatch na-eguzogide ọgwụ ezubere maka ndị na-eme egwuregwu
Xiaomi na-ekwuwapụta elekere Watch Watch maka Jenụwarị 3
Xiaomi ekwuputala ọhụụ smartwatch Watch ọhụrụ maka Jenụwarị 3 na China. Anyị nwere ike ịhọrọ ihe karịrị agba 1.000.
Xiaomi Mi Watch Premium Edition na-egbu oge ruo Febụwarị
Versiondị mbipụta nke Xiaomi nke Mi Watch na-egbu oge ịmalite ya. Onye nrụpụta chọrọ inwekwu oge iji gbasaa ngwaahịa.
Ahịa ndị ekike na-aga n'ihu na-eto eto n'ụwa niile
Ndị na-eyi uwe na-aga n'ihu na-etolite ahịa ha zuru ụwa ọnụ na ezigbo ije, dị ka ekpughere na nchọpụta ọhụrụ e bipụtara n'izu a.
Gugulu mezigharia Storelọ Ahịa Play dị na Wear OS
Google emezigharịla arlọ Ahịa arlọ Ọrụ Wear OS, na-egosi ugbu a ihe doro anya karịa nke gara aga, na ịkwalite iji ya eme ihe n'etiti ndị ọrụ.
Smartwatch ahịa na-eto 42% na nkeji nke atọ
Chọpụta karịa gbasara uto ahịa smartwatch gburugburu ụwa n'oge nkeji atọ nke afọ a dịka ekpughere ugbua.
Redmi na-arụ ọrụ na smartwatch ya
Chọpụta karịa gbasara nkwenye na enwere Redmi Watch na mmepe ma ọ ga-akụ ahịa na ọnwa ole na ole.
Ọhụrụ Fosil Hybrid HR hapụrụ Wear OS
Nnwere onwe nke smartwatches abụwo nsogbu nye ọtụtụ ndị ọrụ, nsogbu dabere na otu ị si hụ ya, ebe ọ bụ na ...
Xiaomi Mi Watch: Igwe smartwatch nke Xiaomi bu nke izizi
Chọpụta ihe niile gbasara Xiaomi Mi Watch, elekere mbụ nke ụdị ndị China na-eji Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ nke ewetarala.
OnePlus nwere ike na-arụ ọrụ na smartwatch
Chọpụta ihe banyere asịrị na-abịa site na mgbasa ozi dị iche iche na OnePlus na-arụ ọrụ na smartwatch mbụ ya maka 2020.
Xiaomi na-egosi smartwatch ya na vidiyo
Chọpụta ihe banyere interface na imewe nke Xiaomi smartwatch nke a ga-ewepụta n'ihu gị n'izu na-abịa.
Weghara oyiyi nke mbụ nke Xiaomi smartwatch
Chọpụta atụmatụ nke Xiaomi smartwatch na Wear OS ga-enwe, nke a ga-ewepụta n'ihu ọha na Nọvemba 5 na China, nke onye isi ya gosipụtara.
Xiaomi ga-ewetara ya elekere ya na Wear OS n’izu na-abịa
Chọpụta karịa maka ụbọchị ngosi ngosi nke mbụ Xiaomi smartwatch nke ga-eji Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ na nke ga-abata na ọdịda a.
Asịrị dị iche iche na-egosi na Google nwere ike ịzụta Fitbit
Nnukwu onye nyocha ahụ nwere ike ịnọ na mkparịta ụka iji weghara ụlọ ọrụ Fitbit, otu n'ime ndị isi na ahịa smartwatch
Enwere ike ịmalite Xiaomi Mi Band 5 na NFC n'ụwa niile
Chọpụta ihe banyere asịrị na Xiaomi Mi Band 5 nke a ga-ebido n'afọ ọzọ ga-enwe nsụgharị na NFC maka onye ọ bụla.
A na-ewepụta Galaxy Watch Active 2 na Spain
Chọpụta ihe niile gbasara mwepụta nke Samsung's Galaxy Watch Active 2 na Spain ebe anyị nwere ike ịzụta ya na ụlọ ahịa.
Huawei Watch GT 2: Smartwatch ọhụrụ ahụ
Chọpụta ihe banyere Huawei Watch GT 2 ọhụrụ a, smartwatch ọhụrụ nke ika China nke enyere n’ihu ụnyaahụ.
Google nwere ike iweta smartwatch na-esote Pixel 4
Chọpụta karịa gbasara asịrị ọhụrụ gbasara ngosipụta nke smartwatch ọhụrụ nke Google na Ọktọba.
A ga-egosi Huawei Watch GT2 na Mate 30
Chọpụta atụmatụ nke Huawei Watch GT2 ọhụrụ a ga-ewepụta n'izu a yana Huawei Mate 30 na onye nhazi ya bụ onye ọchịchị.
Emebere Honor Band 5 na Spain
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke Honor Band 5 na Spain ebe anyị nwere ike ịzụta mgbaaka a site na akara ndị China.
Chọpụta ihe gbasara mbido nke Galaxy Watch Active 2 na ụfọdụ ahịa dị ka usoro mgbasa ozi dị iche iche gosipụtara na America.
Chọpụta ihe niile gbasara Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 na Amazfit X, ọhụụ elekere egwuregwu Xiaomi nke ga-abata n’oge na-adịghị anya.
Chọpụta ihe banyere mmalite nke Casio PRO TREK WSD-F21HR na ahịa, ọhụụ egwuregwu ọhụụ na Wear OS site na ika nke gọọmentị.
Chọpụta ihe banyere Misfit Vapor X nke ika ahụ ewepụtalarị na anyị nwere ike ịzụta ugbu a na weebụsaịtị ya.
Chọpụta ihe niile gbasara Fosil Gen 5, ụdị ọhụụ nke Wear OS smartwatches nke emegoro ugbu a.
Chọpụta ihe niile gbasara Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2, ọhụụ ọhụụ Samsung nke enyerelarịrị na mmemme ma bido na Septemba.
Leaked foto nke Galaxy Watch Ọrụ 2 tupu ya ngosi
Chọpụta ihe banyere foto mbụ nke agbapụla nke Galaxy Watch Active 2 nke akara Korea nke ga-ada ahịa n'oge na-adịghị anya.
Kwadoro imewe na akụkụ nke atụmatụ nke Samsung Galaxy Watch Active 2
E gosipụtawo atụmatụ Samsung Galaxy Watch 2 na-arụ ọrụ na njirimara teknụzụ ya mgbe ọ gafere ụlọ ọrụ asambodo FCC.
Honor Band 5 na-ere na China na ụbọchị mbụ ya
Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke Honor Band 5 na China nke rere ere naanị otu ụbọchị na ire ere na mba ahụ ma kwe nkwa ire nke ọma.
Honor Band 5: Mgbaaka ohuru nke ika
Chọpụta ihe niile gbasara Honor Band 5, mgbaaka ọrụ ọhụụ sitere na akara ndị China nke ewebatalarị na China na mmemme.
Etu ị ga - esi nweta Google Assistant na gị Samsung Galaxy smartwatch na GAssist
Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi nweta Google Assistant na Samsung Galaxy smartwatch gị yana ọ na - ejedebe na Bixby.
Amazfit GTR: Xiaomi ọhụrụ smartwatch
Chọpụta ihe niile gbasara Amazfit GTR site na Xiaomi nke emegoro n'ihu ọha na mmemme na China. Iche ọhụụ.
Wepu onyogho ohuru nke Galaxy Watch n'ọrụ 2
Chọpụta ihe banyere foto ọhụrụ nke Galaxy Watch Active 2 nke a na-agbanyeworị na nzuzo ma na-enye anyị ohere ịhụ atụmatụ nke elekere ahụ.
Nweta Xiaomi Mi Smartaband 4 maka ihe na-erughị euro 30 na Amazon
Chọpụta karịa gbasara nkwalite nke Xiaomi Mi Smartband 4 na Amazon ebe ị nwere ike ịzụta ya na mbelata ego pụrụ iche nwa oge.
TicWatch Pro 4G / LTE: Elekere ohuru nke ika a
TicWatch Pro 4G / LTE bụ ọkwa ugbu a. Chọpụta ihe niile banyere ika ọhụrụ smartwatch nke nwere 4G njikọta na gọọmentị.
Wezugara nkọwa nke Honor Band 5
Chọpụta nkọwa ndị mbụ nke Honor Band 5 na mgbakwunye na ụbọchị ntọhapụ ya na ọnụahịa nke etinyegororịrị na Germany.
Honor Band 5 ga-abịa na Honor 9X
Chọpụta ihe banyere ngosipụta nke gọọmentị nke Honor Band 5 nke nwere ike ime mgbe ọnwa a gasịrị dị ka akara ahụ gosipụtara.
Ihe nkiri Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2 ga-adị ka Apple Watch
Chọpụta karịa ọrụ ndị Galaxy Watch na-arụ ọrụ ga-enwe na ọgbọ nke abụọ ya nke a ga-ebido n'oge na-adịghị anya n'ahịa.
Ngwa ndị dị mkpa iji jiri Xiaomi Mi Band
Chọpụta karịa gbasara ngwa ndị a anyị nwere ike iji na Xiaomi Mi Band mee ka mgbaaka dị mma n'oge niile.
Ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Watch nọ n'ọrụ ga-adị na nha abụọ
Ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Watch nọ n'ọrụ, ga-akụ ahịa ahụ na nsụgharị abụọ: 40 na 44 mm, iji ruo ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa.
Xiaomi Mi Smartband 4 rutere na Europe na-enweghị NFC
Chọpụta karịa ụdị nke Xiaomi Mi Smartband 4 bụ nke a ga-emecha rụọ ọrụ na Europe dị ka amaraworị ya.
Mmelite ohuru maka Samsung Galaxy Watch iji melite nkwụsi ike nke Samsung Health
Samsung Galaxy Watch ka natara mmelite ọhụrụ nke na-elekwasị anya na melite nkwụsi ike nke Samsung Health
Emebere Xiaomi Mi Smartband 4 na Spain
Chọpụta ihe niile gbasara ngosipụta nke Xiaomi Mi Smartband 4 na Spain, onye ọnụahịa ya na ụbọchị mbupute ya bụrịrị gọọmentị.
Xiaomi Mi Smartband 4 bụ onye ọrụ ugbu a: Mara nkọwa niile
Chọpụta ihe niile gbasara Xiaomi Mi Smartband 4, ọgbọ ọhụụ nke ọla aka sitere na akara ndị China nke emegoro n'ihu ọha.
Xiaomi Mi Band 4 enweela ụbọchị mmalite na Europe
Chọpụta ihe banyere ụbọchị mwepụta nke Xiaomi Mi Band 4 na Europe nke ewepụtara n'izu a na China.
Weghachiri ihe osise mbụ nke Xiaomi Mi Band 4
Chọpụta ihe banyere onyonyo nke ugbua abanyela na nke a Xiaomi Mi Band 4 nke a ga-ewepụta n'ihu ọha na June 11.
E gosipụtara Xiaomi Mi Band 4 na June 11
Na June 11, Xiaomi ga-eweta ọkwa nke anọ nke Mi Band.
Huawei na Samsung, ndị na-eto ngwa ngwa n'ahịa dị egwu
Chọpụta karịa gbasara mmụba nke ahịa nke Samsung na Huawei wearables, nke dị nso na ụdị ahịa kacha ere na ahịa.
Xiaomi Mi Band 4: Ihe anyị maara ugbu a
Chọpụta ihe niile anyị maara ugbu a gbasara Xiaomi Mi Band 4 nke akara ndị China kwesịrị ibido n'oge na-adịghị anya n'ahịa.
Anyị na-akụziri gị otu esi ahazi smartwatch China iji dozie nsogbu nke ọkwa na elele ndị a.
Ọgbọ ọzọ nke Samsung Galaxy Watch nwere ike ịbụ smartwatch mbụ nwere njikọ 5G
The Galaxy Fit na Fit E na-eze ulo oru na Spain
Chọpụta ihe banyere mmalite nke Samsung Galaxy Fit na Spain ebe enwere ike ịzụta ha ugbu a na ụlọ ahịa.
Ọ na-esiwanye ike ịhụ smartwach na nkwojiaka nke ọtụtụ ndị ọrụ. Ndị agha ahụ dị mma ...
A na-emelite Michael Kors Sofie smartwatch na mmụba kachasị atụ anya
Onye nrụpụta Michael Kors na-aga n'ihu na-alụ ọgụ iji nweta ebe ọ ga-esi nweta ahịa smartwatch site na ...
Xiaomi Mi Band 3 ruru otu nde nkeji rere na India
Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke Xiaomi Mi Band 3 n'ahịa ndị India, ebe ọ rerela otu nde nkeji na ọnwa isii.
TAG Heuer jikọtara 45 "Golf Edition": New smart smartwatch
Chọpụta niile banyere TAG Heuer ejikọrọ 45 “Golf Edition”, ika ọhụrụ okomoko smartwatch na esesịn e eze n'ihu.
Huawei Watch GT nọ n'ọrụ na Watch GT Mara: Anya ọhụrụ sitere na ika
Chọpụta ihe niile gbasara Huawei Watch GT Active na Watch GT Elegant, elele ọhụụ nke ika China nke ewegoro.
Xiaomi Mi Band 4 ga-enwe bluetooth 5.0 na NFC chip
Asịrị ndị ọhụrụ metụtara Mi Band 4 gosipụtara na ọ nwere ike ịnwe Bluetooth 5.0 na mgbawa NFC iji kwụọ ụgwọ
Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ bịarutere Spain
Chọpụta ihe banyere mmalite nke smartwatch ọhụrụ Samsung na Spain, ihe ngosi Galaxy Watch nke ị nwere ike ịzụta ugbu a.
Xiaomi ga-ebido ọgbọ nke anọ nke Mi Band 4 n'afọ a
Ọgbọ nke anọ nke Mi Band, nke anọ, ga-ebido n'afọ a, dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, mana ọ kọwabeghị mgbe ọ ga-eme.
Ọ bụrụ n ’ikpebizighi ịzụta smartwatch, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị ndị nwere ọnụ ahịa kacha mma maka nhọrọ ego na ahịa.
Fitbit Versa Lite bụ mbido ọhụrụ Fitbit maka smartwatches
Fitbit ka gosipụtara ụdị ọhụrụ nke Fitbit Versa, Lite, ụdị dị ọnụ ala karịa nke na-ebelata ụfọdụ atụmatụ na ụdị zuru ezu.
Huawei ga-ebido ekwentị ọhụrụ abụọ na-enweghị Wear OS
Smartwatches abụọ na-esote nke Huawei ga-ebupụta na ahịa ahụ ga-anọgide na-achịkwa Wear OS, ihe ọzọ na-akpata nsogbu nke Google na ahịa ndị a na-eyiri.
Swlọ ọrụ Swatch katọrọ Samsung maka iyingomi akụkụ ụfọdụ n'ime ihe nlere ya kacha emetụta
Ndị ọrụ mgbasa ozi nke ọtụtụ mba agbaala akwụkwọ ebubo megide Samsung maka, ka ọ na-ekwu, na-edegharị akara nke ụfọdụ n'ime elekere ama ama.
Samsung egosila ihe ọ bụ ya bụ ihe ọhụrụ ya abụọ, Galaxy Watch Acitve na Galaxy Fit. Uwe eji ejiji abuo maka mkpa di iche.
Wee OS ngwaọrụ akaụntụ na-erughị 10% nke US ahịa
Sistemụ arụmọrụ maka Google smartwatches bụ nke kacha nta eji, dị ka nchọpụta kachasị ọhụrụ e bipụtara na United States.
Ngwa kacha mma iji nye n’ụbọchị Valentine
Taa, anyị na-amam ise kacha mma nhọrọ ka ị chọta ndị kasị nkà na ụzụ Valentpo onyinye, iju gị na onye òtù ọlụlụ na a ala-nke na-art gadget
Ihe nzacha na atụmatụ nke Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
Ighapu ọzọ na-egosi njirimara nke Samsung smartwatch na-esote ka a kpọọ ya Galaxy Watch nọ n'ọrụ, ọ ga-abata n'akụkụ Galaxy S10?
A na-enyocha ihe oyiyi mbụ nke Galaxy Sport, na-enweghị ntụgharị ma ọ bụ jiri iko na-atụgharị atụgharị
Mgbe ọnwa ole na ole nke asịrị gasịrị, oyiyi izizi agbapụtala nke ihe smartwatch ọzọ nke ụlọ ọrụ Korea ga - adị: Galaxy Sport
Salmon na Medaka, bụ aha aha koodu Pixel Watch nke ga - eme n'ọdịnihu
Otu nkwenye ọzọ na nnukwu ọchụchọ na-arụ ọrụ na Pixel Watch dị iche iche na ọ ga-ebupụta na ahịa n'oge na-adịghị anya.
Samsung Galaxy Sport nwere ike igosi ya na Galaxy S10
Mgbe inweta asambodo FCC, Galaxy Sport nwere ike ịhụ ìhè nke ụbọchị n'otu ihe omume dị ka Galaxy S10
Chọpụta ngwa ise ndị a na - enweghị ike ịnwe site na smartwatch ọ bụla yana Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ iji nweta ọtụtụ ihe na ya.
A na-emelite Samsung Gear S3 na ọrụ ọhụrụ
Chọpụta ihe banyere mmelite ndị na-abịarute Samsung Gear S3 na mmelite ọhụrụ ya nke bidoro ịmalite na United States.
Google na-etinye $ 40 nde na Fosil's smartwatch division
Google na Fosil ekwuputala nkwekorita ha ruru maka onye choro ka inweta akuku amamihe nke ya na-emepe
Nsụgharị mbụ nke Galaxy Sport gosipụtara ezigbo bezel
A na-ewepụta nsụgharị nke mbụ nke anyị ga-ahụ etu Galaxy Sport nwere ike isi nweta ahịa ma ọ bụrụ na kpochapụ bezel kpochapụwo, mana na ọgbọ a ọ ga-adị mma.
TicWatch E2 na TicWatch S2: Elekere ohuru na Wear OS
Chọpụta ihe banyere TicWatch E2 ọhụrụ na TicWatch S2, na Wear OS na-ele anya na akara ahụ ekpughere na CES 2019.
N’oge na-adịghị anya, ị ga-enwe ike ijikwa igwe ịsa ahụ Whirlpool na smartwatch gị na Wear OS
Onye rụpụtara akụrụngwa amamịghe ga-agbakwunye nkwado maka Wear OS n'ime afọ niile, ma nye anyị ohere ijikwa ha n'ụzọ site na nkwonkwo aka anyị.
Samsung na-arụ ọrụ ugbu a na Galaxy Watch Sport
Companylọ ọrụ Korea bụ Samsung amalitela ọrụ na Galaxy Watch Sport, ụdị egwuregwu nke Galaxy Watch nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'ọnwa August gara aga.
Zeblaze THOR 4 Plus, smartphone nwere nche maka ihe karịrị 100 euro
Ugbu a, na dabere na ojiji anyị ji ekwentị anyị, ọrụ ma ọ bụ ndụ onwe anyị, ọ ga-abụ na mgbe niile ...
Esi gbanwee ihu igwe na wear gam akporo
Ọ bụrụ n’inwela ike gwụrụ mgbe niile na-eji otu elele ihu na gị wear smartwatch, nke a bụ otu esi agbanwe ya.
Esi ewepu ihuenyo na gam akporo Wear
Ọ bụrụ na ị nwere mkpa na-nseta ihuenyo nke gị ọnụ jisiri site gam akporo Wear ma ọ bụ Wear OS, mgbe ahụ anyị na-egosi gị usoro ime ya.
Tidal mara ọkwa mwepụta nke ngwa nke ya maka Samsung smartwatches
Egwuregwu egwu egwu egwu Tidal, ka malitere ngwa mbụ maka wearables site n'aka Samsung smartwatches nke Tizen jikwaa.
Egwuregwu Fosil: Wear OS na Snapdragon Wear 3100 maka smartwatch a
Egwuregwu Fosil: Igwe smartwatch nke mbụ na Snapdragon Wear 3100. Chọpụta karịa maka ika wear OS smartwatch ọhụrụ.
Fitbit Charge 3 enye gị ohere ịtọ nzaghachi ngwa ngwa na ndị ọrụ gam akporo
Fitbit Charge 3 natara mmelite nke ị nwere ike ịzaghachi ozi site na nzaghachi ngwa ngwa.
Lenovo Watch S na Watch C: elekere mara mma na elekere mara mma maka ụmụaka
Lenovo Watch S na Watch C smartwatches bụ ndị ọrụ. Mụta ihe niile banyere ndị a ọhụrụ ulo oru ngwaọrụ.
Spotify maka Wear OS ga-enye anyị ohere ịnyagharịa n’etiti ndepụta, egwu echekwara na ọtụtụ ndị ọzọ
Wear OS nke Spotify ka natara nnukwu mmelite nke na-agbasawanye ọnụọgụ atụmatụ ndị ọ nyere ugbu a.
Huawei Watch GT bụ smartwatch ọhụrụ na-enweghị gam akporo Wear
Ichefu gam akporo eyi na ohuru Huawei Watch GT nke ruru izu abụọ nke ndụ batrị ma ọ bụrụ na ejighị GPS na ihe mmetụta obi.
Google kwupụtara Wear OS 2.1 na nhazi na njikwa njikwa ndozi
Google ka kwuputara isi akụkọ ga-abia n’ọdịnihu nke Wear OS 2.1
Ihe ngosi Xiaomi ohuru na NFC, ihe mmetuta obi na otutu ihe ndi ozo
Huami Amazfit Verge bụ smartwatch nke Xiaomi nke ga-adịgide na China ugbu a. Elekere nwere ihe mmetuta obi na NFC.
A kwadoro Huawei Watch GT na Honor Watch
Huawei Watch GT na Honor Watch gbaara na Europe. Chọpụta ihe banyere elekere ọhụụ abụọ a site na akara ndị China
Snapdragon Yiri 3100: The processor maka eyi OS ese. Chọpụta ihe gbasara nhazi ọhụrụ a site na ika nke ewegoro.
Google agaghị ewebata smartwatch ọhụrụ n'afọ a
Ọtụtụ ndị abụwo asịrị ndị gbara gam akporo Wear, ugbu a WearOS, n'afọ niile. Na ọ bụrụ na Google bu n'obi ime ka ikpo okwu ya na onye na-achọ ihe ntanetị akwadoro na ọ gaghị eweta smartwatch n'afọ a.
Xiaoxun Children Smartwatch S2, smartwatch dị ọnụ ala nke emere maka ụmụaka
Ejiri Xiaoxun Children Smartwatch S2 na China. Mụta ihe niile banyere igwe ọhụụ ọhụụ ọnụ ala emere maka ụmụaka.
Xiaomi Mi Band 3 dị na Spain site na taa
Nwere ike ịzụta Xiaomi Mi Band 3 na Spain. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke mgbaaka akara ndị China na Spain.
Samsung Galaxy Watch dị ugbu a na Spain
A na-ere ahịa Galaxy Watch na Spain. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ọhụụ Korea ọhụụ.
Xiaomi bụ akara nke abụọ kacha ere ahịa zuru ụwa ọnụ. Chọpụta ihe banyere ahịa nke akara ndị China na nke a.
Onye isi nke Huawei ekwuola na ụlọ ọrụ ahụ echefubeghị ngalaba na elele anya smart kama ọ na-achọ ịmepụta onye asọmpi tozuru etozu
Google agaghị ewepụta Pixel Watch afọ a
Pixel Watch nke Google agaghị ebuputa afọ a. Chọpụta ihe banyere ihe ndị mere na Google Watch agaghị amalite na 2018.
Casio Pro Trek WSD-F30: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta. Choputa ihe nile banyere igwe smartwatch a ekpuchitere na IFA.
Google ga-arụ ọrụ na nke ya mma nnyemaaka
Nchịkọta Google: Onye enyemaka ahụike Google. Chọpụta ihe banyere onye inyeaka nke ụlọ ọrụ ahụ na-ebupụta n'ọdịnihu dị nso.
Samsung Galaxy Watch: Ntughari ohuru nke Samsung ese
Samsung Galaxy Watch: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite. Chọpụta ihe banyere elekere ọhụụ site na akara Korea gosipụtara taa.
Qualcomm iwebata ihe nhazi ohuru smartwatch ya na Septemba
Qualcomm ga-eweputa ihe nhazi smartwatch ọhụrụ ya na Septemba 10. Chọpụta karịa maka ika ọhụrụ Snapdragon.
Weebụsaịtị nke Samsung na - ewepụta ihe osise izizi nke Galaxy Watch
Otu n'ime ngwaọrụ ndị anyị kwurula banyere nke kachasị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, nke ahụ abụghịkwa ama, bụ Galaxy Watch, smartwatch nke ụlọ ọrụ ahụ. na United States.
A ga-ewepụta Galaxy Watch n'akụkụ Nkọwa 9 ma agaghị ebu Wear OS
Samsung Galaxy Watch, ọ bụrụ na akpọrọ ya n'ikpeazụ, a ga-ewepụta ya na August 9 site n'aka Nkọwa 9, ma ga-ebu Tizen kama Wear OS.
Armani na-ekwuputa smartwatches ọhụrụ ya yana Google Assistant gụnyere
Ugbu a ị nwere ike ịmata ọhụụ ọhụụ ọhụụ Armani nke ejiri Google Assistant na jikọtara Wear OS mara.
Spotify Lite dị ugbu a na-akwadoghị maka Wear OS
Otu onye ọrụ mmepe XDA weputara nsụgharị na-akwadoghị nke Spotify Lite maka Wear OS nke na-enye anyị ohere ijikwa njikwa akaụntụ anyị.
A ga-ewepụta Huawei TalkBand B5 na July 18
Huawei ga-ewebata Huawei TalkBand B5 na July 18. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke mgbaaka ọhụrụ nke akara ndị China.
Huawei nwegasịrị usoro ihe eji eme ihe nke ga - enyere gị aka ịchekwa ekweisi
Huawei n’emeputa smartwatch nke gha enyere gi aka idobe ekweisi. Chọpụta ihe banyere patent ọhụrụ maka akara ndị China.
Snapdragon Yiri 2500: Qualcomm nzo na smartwatches maka ụmụaka
Snapdragon Yiri 2500: Nhazi maka smartwatch ụmụaka. Qualcomm nzo na nche maka obere ụlọ.
Xiaomi Mi Band 3 na-ere otu nde nkeji na ụbọchị 17
Xiaomi Mi Band 3 ruru otu nde nkeji rere. Choputa ihe banyere oganihu ohuru nke mgbaaka Xiaomi na China.
Russia 2018. Nke a bụ smartwatch ndị nchịkwa na-achịkwa site na Wear OS
FIFA enyefela ụlọ ọrụ Switzerland Hublot ka ọ jikwaa ọkwa VAR
Samsung Gear S3 bụ ezigbo ngwaọrụ nkwukọrịta maka ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ
Koreanlọ ọrụ Korea agbanweela Gear S3 smartwatch ya ka ọ bụrụ ezigbo ngwaọrụ iji mezie arịrịọ ndị ahịa na họtel
Wear OS agaghị ejikwa Samsung ọzọ Gear S4
Ndị Asia ụlọ ọrụ Samsung ga-emesị jiri gam akporo Wear dị ka sistemụ arụmọrụ nke ọzọ smartwatch, Samsung Gear S4
Riley Touchscreen Smartwatch: Elekere ohuru na Wear OS
Riley Touchscreen Smartwatch Marc Jacobs 'na Wear OS. Chọpụta ihe banyere smartwatch ọhụrụ nke na-akụ na ahịa nke na-eji ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Asus VivoWatch BP: Smartwatch ọhụrụ nke na - atụle ọbara mgbali gị
Asus VivoWatch BP: The smartwatch nke na-atụle ahụike nke onye ọrụ. Chọpụta karịa maka elekere Asus ọhụrụ, nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na ihe omume na Taiwan.
Xiaomi Mi Band 3 ka echekwara oge 640.000 na China
Xiaomi Mi Band 3 na-enweta ndoputa 640.000 na China. Chọpụtakwuo ihe ịga nke ọma nke mgbaaka na mba gị ebe ị nwetara ndapụta tupu ire ere mbụ ya.
Huawei Watch 2 (2018): Oge nche ọhụụ na Wear OS
Huawei Watch 2 (2018): Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite. Chọpụta ihe banyere nche nke akara ndị China nke na-anaghị ahapụ anyị ihe ọhụụ ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga.
Xiaomi Mi Band 3: Ọgbọ ọhụrụ nke mgbaaka bụzi ọrụ
Xiaomi Mi Band 3: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite. Choputa ihe banyere mgbaaka oru Xiaomi ohuru nke egosiputara taa na ihe omuma nke ndi China.
Ego ejirila ọnụ ahịa nke Xiaomi Mi Band 3 chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara ọnụ ahịa mgbaaka akara ndị China ga-enwe mgbe ọ kụrụ ahịa ahụ.
Xiaomi Mi Band 3 ga-eweta na May 31
Kwadoro: Xiaomi ga-eweta Xiaomi Mi Band 3 na May 31. Chọpụta ihe banyere mmemme mmemme nke akara ngosi China nke anyị nwere ike ịche maka ngosi nke mgbaaka gị.
TicWatch Pro: Elekere na WearOS nke dị ụbọchị 30
TicWatch Pro: Elekere na WearOS na ihu abụọ. Chọpụta ihe gbasara ngosipụta elekere abụọ, ekele nke ọ nwere ike ịchekwa batrị na ụbọchị 30 gara aga.
Samsung Gear S4 ga-ejikwa OS eyi, ọ bụghị site na Tizen
Dabere na asịrị kachasị ọhụrụ, smartwatches na-esote na Samsung's Gear S nso nwere ike jikwaa site na OS, kama Tizen
A na-edozi ihe oyiyi mbụ nke Xiaomi Mi Band 3
Ihe oyiyi mbụ nke ihe ga-abụ ọgbọ nke atọ nke Xiaomi Mi Band 3 ka edozichara, na ebe ị nwere ike ịhụ nhazi n'ihu ma jiri ihuenyo nwere ozi ndị ọzọ.
Samsung ga-arụ ọrụ na nche na Wear OS. Chọpụta ihe banyere nche ele anya nke ga-esite na akara Korea n'afọ a.
Google Assistant maka Wear OS ka emelitere na atụmatụ ọhụrụ
Google Assistant maka Wear OS ka emelitere na atụmatụ atọ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ ndị a na-abịakwute osote na elekere smart.
Google na Fitbit ga-arụ ọrụ na wearable na-atụle ahụike onye ọrụ
Google na Fitbit ga-ebido wearables iji tụọ ahụ ike n'ụzọ ziri ezi karị. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ chọrọ ịbanye na ngalaba ahụike.
Xiaomi ekpughere ihe onyonyo mbụ nke Xiaomi Mi Band 3. Chọpụta karịa maka onyonyo izizi nke ọla aka akara ahụ ekpughelarị ụdị ọ ga-enwe
Ihe ise kachasị mma maka gam akporo Wear na Wear OS. Chọpụta nhọrọ a nke ngwa ị nwere ike iwunye na igwe elekere gị.
Nzacha data mbụ nke Xiaomi Mi Band 3
Ihe izizi banyere Xiaomi Mi Band 3 agbaala agbapụ. Chọpụta ihe gbasara mgbaaka ọhụrụ nke akara ndị China na-atụ anya na ọ ga-ada ahịa na afọ a.
Google Pay for Wear OS na-abịarute Spain
Google Pay na-abịa na nche na Wear OS na Spain. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ugwo ngwa na-erukwa ese na Google sistemụ.
Ndị a niile bụ gam akporo Wear smartwatches nke a ga-akwalite na Wear OS
Mgbanwe sitere na Android Wear to Wear OS nke Google bụ ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ma smartwatch gị ga-emelite, mgbe ahụ anyị na-egosi gị ụdị niile dakọtara.
Fitbit Versa: branddị smartwatch dị ọnụ ala
Fitbit Versa: Nkọwa nke smartwatch ọhụrụ dị ọnụ ala. Chọpụta karịa maka akara elekere ọhụụ nke na-abịa na ọnụ ala karịa ọtụtụ ụdị na ahịa.
Njikọ Ntanetị 41: TAG Heuer na-egosi obere smartwatch. Chọpụta ihe banyere smartwatch ọhụrụ site na ụdị ama ama.
Mgbochi: The smartwatch modular na gam akporo na-ere ere
Ihe Mgbochi: Modulu gam akporo smartwatch adịla adị n'ezie. Chọpụta karịa maka elekere modular mbụ ka ọ bịa na gam akporo na ihe nlereanya a.
Ndị a bụ ọhụụ elekere gam akporo gam akporo enyere na CES 2018
CES 2018: Kpoo ọhụụ ọhụrụ na Wear gam akporo. Chọpụta ihe banyere smartwatches ọhụrụ ndị a ekpughere na CES 2018.
Complete ndepụta nke smartwatches na melite gam akporo Oreo. Chọpụta ndepụta nke Google gosipụtara site n'ụdị ga-emelite.
Android Oreo na-abịa ilele anya na gam akporo Wear 2
Gam akporo Wear 2.0 ese melite gam akporo Oreo. Chọpụta karịa maka imelite smartwatches na ụdị ọhụrụ.